Tuulo halyeey ka dhigta qofka daroogadu dilootay - BBC News Somali
Tuulo halyeey ka dhigta qofka daroogadu dilootay
11 Juunyo 2019
Alex Morrison waa khabiir dhanka dhismaha ah kaas oo noloshiisa inteeda badan la daalaa dhacayey daroogo iyo aalkalo.
Waxa uuna ahaa qofkii ku horreeyey ee la geeyo tuulada lagula tacaalo dadka daroogadu dilootay ee lagu magacaabo River Garden ee Scotland, shaqo ayuuna haatan bilaabay asagoo ka soo kabtay bukaannimadii.
Tuuladaan, oo la aas aasay bishii March ee sanadkii 2018, ayaa ah meesha kaliya ee dhaqancelinta noocaas ah laga helo dalka UK oo idil. Waxaana meelo halkaas la mid ah horay looga hirgaliyey dalalka Talyaaniga, Sweden iyo Maraykanka.
Dadka daroogada kasoo kabtay ee halkaas ku nool ayaa ka shaqeeya dhisidda guryaha kaddib marka ay dhammaystaan barnaamij saddex sano ah. Shaqadooda ayaa la xiriirta dayactirka guryaha gaboobay, beeridda ubaxyada iyo cuntooyinka waxaana sidoo kale halkaas kuyaal Maqaayad ay dadweynuhu isugu yimaadaan toddobaadka dhammaadkiisa.
Dhaqaalaha dadkaas ku baxaya ayaa waxaa bixiya dad deeq bixiyeyaal ah.
Arrinta soo jiidashada leh ayaa ah in bukaanada halkaas ku sugan ay shaqeeyaan oo ay mushaar qaataan isla markaasna ay iska bixiyaan ijaarka halka ay daggan yihiin, waxay sidoo kale gacan siiyaan bukaanada kale ee halkaas dhawaan yihid.
Ninkaan toddobaatan iyo afar jirka ah ee lagu magacaabo Alex waxa uu haatan ku shaqaystaa xirfaddiisa fuundinnimada waxa uu gacan ka gaystaa sidii loo dayac tiri lahaa dhismeyaasha iyo sidiii uu xirfaddaas dadka kale u bari lahaa.
"Waxaan ahaan jiray mid khamriga si waalan u cabba waxaan isticmaali jiray daroogooyin kala duwan xaaladdayduna way sii xumaanaysay," ayuu yidhi.
"Daawada halkaan taal waa in qofku daawado hareeraha; sida beeraha, guryaha cagaaran, in uu dadka ka kale la shaqeeyo, in uu dadka kale la sheekaysto, iyo in uu ku xidhnaado shaqaalaha halkaan ku sugan."
Marka laga yimaado in Alex uu xirfaddiisa baro dadka daroogada kasoo kabanaya, wuxuu sidoo kale talooyin ku aaddan sidii ay u caafimaadi lahaayeen siiyaa saxiibbadiisa kale.
Mark Bitel, oo ahaa nin ay horay daroogadu u dilootay ayaa in uu caafimaado waxay ku qaadatay 30 sano, waana ninka gacanta ka gaystay in la aas aaso tuuladaan River Garden Auchincruive ee lagu caawiyo dadka ka soo kabanaya daroogada.
Fikraddaas ayuu keenay Scotland kaddib markii uu booqday xarun taas la mid ah oo lagu magacaabo San Patrignano community, kuna taal dalka Talyaaniga.
Xaruntaas ayaa furnayd tan iyo sanadkii 1978, Mark Bitel ayaana sheegaya in 80% ciddii raacda barnaamijka halkaas laga bixiyo aanay dib dambe ugu laaban daroogada.
Waxa uu intaas ku daray in dadka cusub ay wax ka bartaan dadkii ayaga horay uga soo horreeyey ee caafimaaday.
John McDonald, waa 35 jir ku koray Glasgow. Waxa uu toos ugu biiray barnaamijkan asagoo xabsi kasoo baxay waxa uu haatan halkaas ku jiraa muddo sagaal toddobaad ah.
"Wax wayn ayuu barnaamijkani nolshaydii ka baddalay, horay uma helin daryeel noocaan ah," ayuu tyidhi
"Waa wax aan u baahnaa. Waxaan u baahnaa in la iga kexeeyo deegaanka aan joogay, waayo hadda uun baan xabsi kasoo baxay waxaan samayn lahaa wixii aan horay u samayn jiray".
Kaddib markii ay u dhammaatay saddexdii sano, Alex waxa uu ku rajo wayn yahay in uu bilaabo ganacsi u gaar ah, balse waxa uu sheegayaa in uu gacan siin doono dadka kale ee ku sugan tuuladaas.